トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Gold UPty (Gold Aputi) [wokurarama zvikwereti chete]
The twasu-mutsetse wevacheche, akadana wepagore mwero
nepakati yemasiraidhi hurongwa, kana akaenzana kana kupfuura shoma pamari yezvikwereti iri kubhadharwa, unogona takasununguka akaratidza pamwedzi nokuripira.
10 Man mamiriyoni 3 Yen kubva Yen
Gold UPty (Gold Aputi) ndiko, kuti wokurarama chikwereti vakazvitsaurira Orico boka rakapa, mune rimwe vanonzi Gold kadhi, Airport unogona kugamuchira akazvitsaurira basa chete Gold kadhi yokuisira, etc. yokutandarira. High utility ukoshi sezvo Yaunoti chinzvimbo chiratidzo, pane mukuru zvikwereti mhiri kwemakungwa.
wepagore muripo sechinhu kadhi goridhe wakaiswa yakaderera rava 5000 Yen pagore. Kazhinji makore anopfuura 20 zera akatsiga uye pane chimiro kwemari. Has partnered naTenzi Card, ichiwanika munyika dzakawanda mhiri kwemakungwa. Kana akaenzana kana kupfuura shoma pamari yezvikwereti iri kubhadharwa, unogona takasununguka akaisa pamwedzi nokuripira.
muripo pagore kwete chete wakaiswa yakaderera chaicho mwero pagore kuri kuderera, yakaiswa kuti 10.2%. Kana uchishandisa 150,000 Yen, pamwero pagore 10 mubereko kuti 150,000 Yen. It anova 1299 Yen kane mazuva 31 yakakamurwa mari kane 2 muzana mumazuva 365. Nekuti debit chinhu ne- Somuenzaniso, uye iwe kuisa chemhosva mari kusvika 6,000 Yen, wechikoro achapiwa dzinounzwa ndiyo 4701 Yen kubvisa mubereko.
uye mashandiro ave kadhi negoridhe nouchapupu, kuwedzera panhandare yendege anogona kushandisa yokutandarira private, chave vachifambidzana motokari mutoro webasa, ndipei 24 maawa pazuva, mazuva 365 pagore mutsaona yemotokari kana atadze kushanda zvakanaka iwe. Gold kadhi mukwende pakukurukura kuzvipatara uye mabasa kufamba uyewo chete yokuisira kuti ndege dzemarudzi zvave kwemasanga mabasa iripo. Domestic uye mhiri kwemakungwa kufamba tsaona inishuwarenzi kunyange kwemasanga, kudzikamisa kufadza mamiriyoni 50 Yen kuti tsaona.
Uyezve, asiwo anoenderana kurasikirwa kana kuba, chaiko kune vasati 60 mazuva ziviso pamusoro zvakakanganiswa kunze komutemo kushandiswa, uye mutoro Orrico aiva kunze komutemo kushandiswa kukuvara. Sezvo Gold nhengo Orico, zvinokwanisika kuti kugamuchira urongwa mashoko uye mabasa kunakidzwa akaenda kunze kwenyika, unogona kushandisa Honolulu Lounge chete Gold kadhi yokuisira vari kuHawaii.
muri unopindiranawo caching, unogona caching mhindu huru prices ari Gold kadhi nhengo chete. Kunetseka mari iri isingachadiwi panguva zvashata. Rinogona kushandiswa sezvo zvemagetsi mari, izvo unoenderana Id uye QUICPay, rinogona kushandiswa kunotenga, zvakadai somunhu nyore chitoro.
akapfuudza kadhi iri yakarumbidza
mukuru nokuda Travelers, zvinokwanisika kuti kugamuchira urongwa basa achamutsa notch, vazhinji vepamusoro rukoko uye maindasitiri vanhu mhiri kwemakungwa mabhizimisi rwendo, munhu kadhi kuti zvakakodzera Executives wekambani kwakadaro.
Uyezve, kana handingadariki 5000 Yen wepagore muripo, kuwedzera kunogona kugamuchira renguva yakazara, nokuti yechimbadzo mubereko uye caching mu wokurarama zvikwereti hunobatsira, zvose kubhadharwa nezuva kuda kupedzisa ari kadhi imi munoti kadhi wakakwana nokuda vanhu.
kadhi mhuri Nekuti ini rakapa pasina muripo pagore, yava ndiverenge vanhu vanoda kushandisa kadhi chete nemhuri. Sezvo anenge zvose lineup kadhi kushanda sechinhu ndarama, pane mukuru mukurumbira, unogona kuwana mubato notch mhiri kwemakungwa.